Elisabeth Lang - okhethekileyo kwi-eTN, uMbhali ku eTurboNews | Iindaba zeTravelIndustry
Elisabeth Lang-okhethekileyo kwi-eTN
UhlangeneSeptemba 16, 2017
U-Elisabeth usebenze kushishino lohambo lwamazwe ngamazwe kunye neshishini lokwamkela iindwendwe amashumi eminyaka kwaye enegalelo kwi-ETN phantse iminyaka engama-20. Unothungelwano lwehlabathi jikelele kwaye uyintatheli yohambo lwamazwe ngamazwe.
Iindaba eziziiNdaba zokuHambaIlizwe | UmmandlaEUIcandelo lokungenisa izihambiIihotele kunye neeholideNewsletterabantuTourismIindaba zeWired Traveliunited Kingdom
Ezona nkokeli zoshishino zaseLondon ezinovelwano zincame iibhedi zazo ubusuku obunye nge-22 kaNovemba ukuze zilale ngaphandle kwi-Lord's Cricket Ground, zinyusa imali kubantu abajongene nokungabi namakhaya kobu busika.
Phantse kumashumi amabini eminyaka eyadlulayo, indawo yokupakisha inyama emdaka yaseNew York yaguqulwa yaba yindawo enefashoni, edlamkileyo kunye nabayili befashoni abanjengoStella McCarthy evula indawo yakhe yokuqala yaseNew York kunye nokuba ngumdlali wefashoni.
Ndwendwela iSwitzerland entsha: Iihotele eziSetyenziswa ziRobhothi azifuni ziNdlela neeMoto, kodwa iiLamas, iiBhokhwe kunye neeSceneries eziPhefumlayo.
Yayilumdla, amathuba othungelwano, iintetho zorhwebo ezizise abanikazi behotele kunye namaqabane omboniso angaphezu kwe-100, ajongana neshishini leHotele emva kweentsuku ezingama-600 zokungabikho ngokuzolileyo ngenxa yezithintelo ezingapheliyo zeCorona. I-Halle 550 ikude nesiqhelo esimenyezelayo kunye nobukhazikhazi beNdawo yeeHotele zeenkwenkwezi ezi-5 eZurich, apho olu hlobo lwengqungquthela luqhele ukubanjelwa khona.
Uhambo oluya eYurophu ngamaxesha e-COVID
Ukuxhalaba okutsha malunga neliza lesibini le-COVID-19 kweza ngelixa iNkulumbuso yase-Bhritane, u-Boris Johnson, erhoxise uhambo olucwangcisiweyo ekuqaleni kwale veki.
Amazwe alishumi akhuselekileyo kunye neyona mpendulo ibalaseleyo ye-COVID
I-Coronavirus yathatha umhlaba ungalindelanga. Uninzi lwamazwe ahambele phambili asilele ukukhusela abemi bawo. INew Zealand, iAustralia, iLatvia okanye iCyprus yinto enkulu eyahlukileyo.
ISpain ikhephu: Izenzo ezingaqhelekanga zabantu abaqhelekileyo
ISpain ihlupheka ngenxa yesiphepho esikhulu egama linguFilomena, isizisa ubushushu obuphantsi kunye neentaba zekhephu. Kwaye olona suku lubi luseza bathi iimetologists. Kuyo yonke le nto, yimizamo yabantu abaqhelekileyo yokufumana ilizwe kule ntlekele yasebusika.
IFilmena ilahla ikhephu elinzima eMadrid ukusukela ngo-1971
ISpain yaziwa ngokuqaqamba kwelanga, iilwandle kunye nesibhakabhaka esihle esiluhlaza. Namhlanje uFilomena utshintshe lo mboniso waba ziiyure ezingama-30 zokuwa kwekhephu. Yinkanyamba yekhephu engazange ibonwe yiMadrid iminyaka engama-50. IMadrid kwafuneka ivale isikhululo seenqwelomoya kwaye inkonzo kaloliwe yaphazamiseka
UDavos uya eBürgenstock: Uhlobo lweForam yezoQoqosho lweHlabathi
Ifike yaba ngummangaliso omkhulu kuye wonke umntu eDavos – iQonga lezoQoqosho leHlabathi (i-WEF). Ewe, iWEF 2021...
UCarrie Symonds eLockdown kwiLake Como?
Besihlala sizibuza ukuba kutheni singazange sibone naziphi na iifoto ezisemthethweni kunye nezonwabileyo zosapho zikaBoris Johnson kunye noCarrie Symonds...
UMilan ubuya umva kwi-COVID-19
Elona xesha lilungileyo lokubona iMilan kusehlotyeni. Iindlela zicacile, i-autostrada ehamba phambili esuka eSwitzerland ...
Xa udlula umda waseSwitzerland / waseItaliya eChiasso, kwelinye icala kwakukho amaPolisa aseSwitzerland angenamaski kodwa ngaphakathi kuphela ...
I-Italiya ngamaxesha obhubhane we-COVID-19 coronavirus
Kule veki, i-Italiya ibihlawula imbeko kwabo basweleke kwi-coronavirus ye-COVID-19 ngokuphaphazela iflegi kwisiqingatha semasti.
I-Italiya ithatha amanyathelo amadrasi ngokuchasene ne-coronavirus
Kwiveki ephelileyo, iMilan, eItali, ibibambe owona mboniso wefashoni kwiminyaka yeqonga. Isinqe sincinci, namagxa...
Ukoyikwa kweCoronavirus kubangela ukuCinywa koMsitho oMkhulu weHlabathi
I-coronavirus iyaqhubeka nokuba nefuthe kwiintlanganiso nakwishishini lemisitho, ibangela ukuba ababonisi baphume ...
Abakhweli boMoya base-Itali: Kufuneka wenze ntoni xa unamatikiti
Iiveki, wonke umntu e-Italiya ebebuza ukuba kuzakwenzeka ntoni kwi-Air Italy. Loo mpendulo ifike izolo....
Ukuya e-USA: Ngaba ukulungele ukuJika okungalindelekanga?
Xa ndikhwela i-Lufthansa flight 480 ukusuka eMunich, eJamani, ukuya eMiami, eFlorida, kuhambo lwam lokuqala lokuya e-USA,...
UThomas Cook kwiveki enye kamva: Siphi ngoku?
UThomas Cook, owasekwa ngo-1841, wayengomnye wamashishini amakhulu eeholide zehlabathi anabasebenzi abangama-21,000 kumazwe ali-16 kuquka...
I-Basel: Iigugu zeeNdawo zeehotele kunye nemiboniso
Ilele kumbindi weBasel eSwitzerland, iGrand Hotel Les Trois Rois yenye yeehotele zakudala zedolophu...
IHollywood iya eLariowood: Indawo encinci eya kuba yidolophu yabakhenkethi
ILake Como, ekwabizwa ngokuba yiLario emva kwegama lesiLatini lechibi, ibiyeyona ndawo idumileyo yokurhoxa kwizihandiba...
U-Obama uyabuya! Ngeli xesha hayi eSpain kodwa e-Itali
Kuhambo lwakhe lwakutsha nje ngo-Epreli oluya eSeville, eSpain, kwi-WTTC SUMMIT 2019, utyelelo luka-Obama beluxabisa kakhulu....
Ingqungquthela yotyalo mali yeArabhu ibuyile: Kutheni ingummangaliso
Kunyaka ophelileyo, ukufuduka kweNkomfa ye-14 ye-Arab Hotel Investment (AHIC) ukusuka eDubai Jumeirah Madinat ukuya kwi-Emirate engummelwane...
Inkqubo yokugqibela yeWTTC 19th Summit: Abatshintshi kubandakanya uMongameli Obama badibana eSeville
I-World Travel & Tourism Council's (WTTC) iza kuya eSeville, eSpain kule veki ukuya kwi-19th Global...
Iinqwelomoya ezingama-30,000 azizukuhlala kwisikhululo senqwelomoya saseMilan ngexesha lehlobo lase-Itali eliphezulu
Isikhululo seenqwelomoya saseMilan saseLinate asikho nje kuphela ukuba ngabakhweli abanobuhlobo kodwa kulula kakhulu ukufikelela kuso usuka kumbindi wesixeko saseMilan. Pha...
I-Carnival Corporation I-AIDA Cruises: Umbulelo obaluleke kakhulu kwimbali
Utshilo omnye umkhweli owayebhukishe i-Pre-Christmas Cruise esele ngoMatshi kwaye wahlawula yonke imali yohambo...
Ukufakwa kobugcisa obukhulu bepoppy ekufuneka ibonwe eMunich ngoSuku lweNkumbulo
Le Cawa iphawula isikhumbuzo seminyaka eli-100 yeArmistice yomhla we-11 kuNovemba, 1918, iphawula ukuphela kweMfazwe Yehlabathi I....
Ukubalwa kwiNdibano yeHlabathi yaBasetyhini ye-2018 eParis
INtlanganiso yeHlabathi yeQonga lowama-2018 yabaseTyhini iya kuqokelela iinkokeli zehlabathi eziphuma kuluntu nakwicandelo lezoqoqosho. Ijongwa njenge...
ILake Como: Yintoni enye into?
Ngelixa iihotele zase-Itali ezingaselwandle zibona iindwendwe ezimbalwa kulo nyaka, kwaye ulindelo lwehlotyana olungalindelekanga aluzange lwenzeke, iLake Como ebengezelayo inazo zonke.
Inkulumbuso engazange ibonwe ngaphambili kwiLifa leMveli le-UNESCO iMedina Al Azahara Cordoba
Indawo yezinto zakudala eMedina Azahara, eCordoba, yongezwa kuluhlu lweendawo zenkcubeko yiLifa leMveli le-UNESCO.
Ingqele engaqhelekanga eziswa yimozulu yaseSiberia ivakala nakumazantsi eMeditera. Kwi...
Isiphithiphithi kwisikhululo senqwelomoya saseMunich
Intsomi yase-US uLindsey Vonn uthumele i-twitter kaxakeka xa wayebambeke kwinqwelomoya yaseLufthansa eMunich...
UMunich ubhiyozela i-Oktoberfest: Nditsho neT terminator wayekhona
UDirndl - okanye akukho dirndl -ngumbuzo lowo. Kubantu bendawo, kunyanzelekile, kwaye kubakhenkethi abafikayo ...
Abakhenkethi basehlotyeni baya e-Italiya ngamanani erekhodi
Iimyuziyam kunye nezikhumbuzo e-Italiya ziwaxabisa amanani arekhodiweyo abakhenkethi abafikayo kulo nyaka, bamkela iindwendwe ezingaphezu kwezigidi ezingama-23 e ...